🥇 ▷ Adigoo isticmaalaya qalabka Bluetooth-ka taleefankaaga casriga ah? Markaa ka fikir laba jeer ✅
Adigoo isticmaalaya qalabka Bluetooth-ka taleefankaaga casriga ah? Markaa ka fikir laba jeer
Shirkadda amniga ee ERNW waxay ogaatay nuglaanshaha cusub ee Android taas oo walaac leh. Kani waa Bluetooth-ka la xiriira taleefanka casriga ah waxaana baari kara qof kuu dhow.
Cawaaqib xumada nuglaantan waxay u horseedi kartaa xatooyo macluumaadka shaqsiyeed ama duritaanka malyuunnada loo adeegsado taleefannada casriga ah. Ka sii darane, daciifnimadaan waa la isticmaali karaa iyadoon faragalin la sameyn, haddii la helo Bluetooth.
Tijaabada ERNW waxay muujineysaa in aaladaha ay saameeyeen ay yihiin kuwa maamula Android 8 iyo 9. Si kastaba ha noqotee, noocyadii hore ee nidaamka qalliinka ayaa waliba laga yaabaa inay u nugul yihiin. Si kastaba ha noqotee, shirkadaha amniga ma qiimeyn karaan saameyntaas.
Aaladaha maamula Android 10, u nuglaantaan looma isticmaali karo. Tan waxaa ugu wacan faahfaahinta farsamada qaar ee xannibaya Bluetooth haddii isku day la sameeyo.
Qaab kale oo aad naftaada uga badbaadin karto dhibaatadan ayaa ah inaad ku rakibto casriyeynta amniga ee Febraayo 2020 taleefankaaga casriga ah. Si kastaba ha noqotee, sida xaaladdii hore, xaaladdani kuma xirna adeegsadaha, laakiin waxay ku xidhan tahay soo-saaraha iyo siyaasadiisa cusboonaysiinta.
Si looga faa’iideysto nuglaantan, dambiilayaashu waa inay ahaadaan kuwo jir ahaan ugu dhow taleefannada gacanta. Si wax walba ay u suurta gasho, waa inay helaan cinwaan MAC ah.
Awoodda la’aanta inaad ku dhejiso Android 10 ama bisha Febraayo cusboonaysiinta amniga, waxaa jira waxyaabo badan oo aad sameyn karto. Sida shirkadda amniga ee ERNW ay tiri, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad dhaqaajiso Bluetooth haddii loo baahdo.
Waxaas ka sokow, uma baahnid inaad qalabkaaga u muujiso dadka kale. Haddii isticmaale xaasidnimo leh uusan ogeyn in taleefannadooda casriga ah ay shaqeynayaan Bluetooth, Suuragal maahan in laga faa’ideysto nuglaantaan.
Marka la soo koobo, hadaadan heli karin cusbooneysiinta ugu dambeysay ee Android, si caqli gal ah u isticmaal Bluetooth. Taasi waxay tiri, waa inaad iska ilaalisaa dabeecadaha qatarta leh, kiiskan, kaliya waxay leeyihiin taleefanka gacanta ee Bluetooth-ka firfircoon oo ay arki karaan qof kasta oo agtaada ah.
La soco horumarkii ugu dambeeyay ee teknolojiyadda ilaa maanta. nala raac Facebook, Twitter, Instagram! Ma dooneysaa inaad nala hadasho? U dir emayl [email protected]